रूपन्देही । रूपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट दुईपांग्रे सवारीसाधन (मोटरसाइकल तथा स्कुटर) को आयात बढेको छ । गत आव २०७५/७६ मा उक्त नाकाबाट दुईपांग्रे सवारीसाधनको आयात अघिल्लो आव २०७४/७५ को तुलनामा ४४ दशमलव ४१ प्रतिशत बढेको हो ।
गत आवमा यो नाकाबाट १ लाख ४५ हजार ८७९ मोटरसाइकल तथा स्कुटर आयात भएका छन् । अघिल्लो आवमा यो संख्या १ लाख १ हजार १५ थियो । गत आवमा रू. १२ अर्ब २९ करोडबराबरको दुईपांग्रे सवारीसाधन आयात भएको छ । अघिल्लो आवमा यस्ता सवारीसाधन रू. ८ अर्ब ४९ करोडबराबरको आयात भएको थियो ।
गत आवमा दुईपांग्रे सवारीसाधनको आयात ठूलो आकारमा बढेको भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत कमलकुमार भट्टराईले बताए । यी सवारीसाधनको आयात वर्षेनि बढ्ने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए । सबैजसो क्षेत्रमा सडक विकास, मानिसको दैनिक आवश्यकता र अन्य सवारीसाधनको तुलनामा सस्तो तथा कम खर्चिलो भएकाले मोटरसाइकल, स्कुटरका प्रयोगकर्ता बढेका छन् । यसले यी सवारीसाधनको आयात पनि बढाएको छ । बेलहिया नाकाबाट आयात घटे पनि यस क्षेत्रका दुईपांग्रे सवारीसाधनको कारोबार भने बढेको छ । यो नाकाबाट हिरो, होन्डा, टीभीएस, बजाजलगायत कम्पनीका दुईपांग्रे सवारीसाधन नेपाल भित्रने गरेका छन् ।
बेलहिया नाकाबाट चारपांग्रे हलुका सवारीसाधन (कार, भ्यान, जीप) को आयातमा भने कमी देखिएको छ । यो नाकाबाट आयात हुने साना सवारीसाधन ४ दशमलव ४७ प्रतिशत घटेको पाइएको छ । नेपालका महŒवपूर्ण नाकाहरू वीरगञ्ज, विराटनगर, नेपालगञ्ज नाकाबाट चारपांग्रे सवारीसाधनको आयात बढे पनि बेलहियाबाट भने घटेको छ । गत आवमा यो नाकाबाट ७ हजार २८१ साना सवारीसाधन आयात भएको थियो । अघिल्लो आवमा यो संख्या ७ हजार ७०१ थियो । यस्तै पिकअप भ्यान, ट्रक, मिनीट्रक आयात समेत केही घटेको छ । अघिल्लो आवमा १२ सय ९० पिकअप भ्यान आयात भएकोमा गत आव ९४२ मात्र आयात भएको भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत कलिराम पौडेलले बताए । भन्सारको तथ्यांकअनुसार पिकअप भ्यान आयात २२ प्रतिशत घटेको छ भने ट्रक तथा मिनीट्रक आयात १३ दशमलव ३८ प्रतिशत घटेको छ । अघिल्लो आवमा २ हजार ८६८ ट्रक तथा मिनीट्रक आयात भएकामा गत आव २ हजार ७२९ ओटा आयात भएको कार्यालयले बताएको छ ।